Abụ m onye ofufe nke John Chow Dot Com, Misdị Dị Iche Iche nke Dot Com Mogul. Na blogosphere, enwere eriri nri ma ọ bụrụ na ịchọrọ, nke ndị na-ede blọgụ. Aga m ekewa John Chow dịka otu n'ime ndị nọ n'elu nri nri. John guzobere TechZone na 1999 ma ndị ọzọ bụ akụkọ ihe mere eme. John nwere ikike n'ihi akụkọ ntolite nke ịntanetị ya, ọgba aghara ya na-atọ ụtọ, na ihe ọmụma ya banyere teknụzụ. Blog ya bu nke m na-ele anya n'ihi na John bu uzo ya na nke ya.
John bụ -ekere òkè ikike ya na weebụ site na ịkọ banyere ndị na-ede akwụkwọ na-enyocha blog ya. Nke ahụ bụ ihe mere m ji ede banyere ya ebe a.
Blọọgụ John na-emekwa nke ọma n'ụzọ ego - isi ihe kpatara m ji esochi ndepụta ya. Y’oburu na ichoro otu esi echekwa ego na blog gi, nke ya nwere ike buru ihe kacha mma ibido. John ejirila atụmatụ nke blọọgụ nwalee, ọnọdụ nke mgbasa ozi, isi mmalite mgbasa ozi, wdg. Ọ jiri nwayọ na-akọ banyere ya niile. A ọma akụkụ nke ya mgbasa ozi revenue na-aga ozugbo ọrụ ebere… nke ahụ mara mma. N'ime oge na-adịbeghị anya, John na-eme mkpọsa kpọmkwem na saịtị ya karịa ndị ọzọ. M na-atụ anya na-agụ ihe banyere otú nke ahụ si aga.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu John, ụdị ọchị ya, yana ọdịnaya dị na saịtị ya, m ga-eleba anya na ihe ndị a:
Ọnye na-bụ John Chow (adịghị njọ)
Ọnye na-bụ John Chow (nke ka njọ)
Postsfọdụ posts na nso nso a na Teknụzụ
John bịara dịka onye na-atụghị egwu, mana ọ bụghị mpako. Ọ bụ ịkwụwa aka ọtọ n’elu ụwa ka enwere ekele. Ahụbeghị m otu post ebe o jiri 'ebe ike okwu' ya were ya wee na-eti onye ọ bụla ihe. Kama, ọ na-ada ụda ma na-atọ ọchị. Echere m na John bụ ụdị nwoke ịchọrọ ị toụ biya. Akpọrọ m ka m zụta ya otu oge ọzọ m ga-anọ na Vancouver.
Agara m ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Vancouver yabụ enwere m obi ụtọ ịgụ ọkwa ya banyere ịnọ na gburugburu otu n'ime obodo kachasị amasị m na mbara ụwa. Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya - nyocha m nke John Chow Dot Com, Misdị Dị Iche Iche nke Dot Com Mogul. Okpu si n'aka gị John… otu n'ime m blogomentors!
John bụkwa otu heck nke onye na-eji ejiji na ịgba egwu…. pịa Ebe a ịhụ ya ka ọ na-arụ ọrụ.